Ụdị ejiji mara mma
Ọdịdị ọ bụla nwere uru nke aka ya, mana o siri ike ịma aka na eziokwu bụ na ejiji bụ ihe dị egwu na nke ikuku. Taa, uwe ejiji gị dị mkpa dị ka mgbe ọ bụla, ma echi ka ị ga-etinye ihe ndị na-emekarị. Ma enwere ụdị, njirimara nke na-abụghị oge. A na-ewere ya dịka isi, ntọala nke ntọala, na nke a bụ ụdị ejiji mara mma nke nwanyị, nke e ji arụ ọrụ, njide na ịdị mma . Uwe ndị dị otú ahụ na-ezochi nwayọọ nwayọọ, ịdị omimi nke ọdịdị nke onye nwe ya, mmetụta nke uche ya na ọgụgụ isi ya. Ejiji ndị mara mma nke mara mma maka ụmụ nwanyị bụ ihe zuru ụwa ọnụ, n'ihi na ọ dị mma maka ụbọchị ịhụnanya na nzukọ azụmahịa. Inwe ezigbo echiche na ndị ọzọ dị mfe!
Uru nke usoro oge ochie
Kedu ihe bụ omimi? Gịnị mere ọtụtụ ndị inyom ji ahọrọ ejiji, na-eleghara nsogbu ndị ahụ anya ozugbo? Ihe bụ na ezughị ezu nke ihe oyiyi a na-agaghị ekwe omume. Ịchọta nkọwa zuru oke na njikọta zuru okè anaghị ahapụ ohere efu. Iguzosi ike n'ezi ihe, nkwekọrịta, nhazi - ya mere i nwere ike ịkọwa ụdị ejiji nke ụmụ nwanyị.
Ndị ọkachamara - ọ bụghị ihe na-agwụ ike, ọ bụ ezie na agba agba bụ nwa, na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ, niile na-acha odo odo. Ọbụna ị nwere ike iyi uwe n'osisi ma ọ bụ oghere, ma ọ dị mkpa ịkwado nkwekọ, ịhụ ihe. Ogbenye na-ejedebe site n'usoro iwu doro anya. Nke a na-emetụta eriri azụ nke ubu, na akwa nchara, na ogologo igwe ogologo. O yiri ka na uwe ndị dị otú ahụ na nwanyị kwesịrị ile anya siri ike, ma n'eziokwu, ihe oyiyi ndị oge ochie jupụtara na ịma mma.
Na nlekọta pụrụ iche, ị ga-abịakwute nhọrọ nke ngwa. Ndị ọkachamara bụ ọla edo kachasị mma, na-ekiri ya na eriri akpụkpọ anụ na obere obere akara igwe, ntanaka anya. Na nhọrọ nke laconism ọla - ọnọdụ dị mkpa. Akara njirimara na akpa. Ụdị dị mfe, akpụkpọ anụ nke agba - nke a kwesịrị ịbụ akpaaka, nke dabara adaba n'ụzọ zuru oke na ụdị oge.
Enweghi ike inyonya na-anabata ya na nhazi. Ọrụ bụ isi nke ịchọ mma ịchọ mma bụ iji mesie ike na ịma mma nke nwanyị. A na-ewere agbachi ntutu isi na-enweghị atụ dị ka ihe eji eme ka ọ dị mma, n'ihi na ọrụ nke ezigbo nwanyị abụghị ihe ijuanya, kama iji merie nkwenye na aka ya!
Kedu ihe ị ga-eji ejiji anụ?
Kedu ihe ị ga-eji ejiji na-acha anụnụ anụnụ?
Nwanyị na-ahụ maka oge Biedermeier
Kedu otu esi esi akwa ụfụ na mmiri ozuzo?
Kedu ihe ị ga-eji akpụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ?
Kedu ihe ị ga-eyi jaket isi awọ?
Anya nke mpaghara Ryazan
Ntak emi ọbọn̄de akwa udọn̄ọ?
Nwunye akwụkwọ z-mgbakwunye
Ekpere maka ahụike nke nwa ahụ
Kedu esi eme nkịta na nkịta?
Ogige Mba Bako
Nri maka ogologo ntutu
Aquapark Carpios Land Parque Acuatico Ịmara
Olee otua esi kpoo isi nke ihe na ihe?
Kylie Minogue ejirila akara ahịa ahụ n'aka Kylie Jenner